कुम्भकर्ण जस्तो सुत्ने बानी छ ? यो पढ्नुहोस् ! | सुदुरपश्चिम खबर
कुम्भकर्ण जस्तो सुत्ने बानी छ ? यो पढ्नुहोस् !
निद्रा कम हुँदा पनि तपाईको स्वास्थ्यमा समस्या देखिने गर्दछ भने निद्रा धेरै हुँदा पनि समस्या देखिने गर्दछ। राम्रो निद्राका लागि तपाईलाई ७ देखि ८ घण्टासम्म सुत्न आवश्यक हुन्छ। डाक्टरले पनि आवश्यकता भन्दा धेरै सुत्ने सल्लाह दिदैनन्। किनकी यसका पछाडि कयौँ बिरामीको कारण हुने गर्दछ। धेरै सुत्दा देखिने स्वास्थ्य समस्याले तपाईलाई जीवनभर दुख दिने गर्दछ। आज हामी तपाईलाई धेरै सुत्दा हुने स्वास्थ्य समस्याका बारेमा जानकारी दिदैछौँ।
मोटोपन :मोटोपन यस्तो समस्या छ, जसका कारण धेरै व्यक्ति यस समस्याका कारण पीडित हुने गर्दछन्। मोटोपना बढ्नु स्वास्थ्यका लागि ठिक हैन्, त्यसमा पनि हाजभोलिका युवा पुस्तालाई मोटोपन घटाएर सिलिम देखिन मन लाख्ने गर्दछ। त्यसैले मोटोपना चाहनुहुन्न भने तपाई दिनमा ७ देखि ८ घण्टासम्म मात्र सुत्ने गर्नुहोस्। किनकी तपाई बिनाकारण मोटोपनाको शिकार हुनु नपरोस्।]
हृदयघातको खतरा :जो मानिस आवश्यकता भन्दा धेरै सुत्ने गर्दछन्, त्यस्ता व्यक्तिमा हृदयघातको समस्या हुने गर्दछ। साथै मुटुको समस्या पनि देखिने गर्दछ। त्यसैले तपाई आवश्यकता भन्दा धेरै नसुत्नुहोस्।
प्रजनन क्षमतामा कमी : जो महिला आवश्यकता भन्दा धेरै सुत्ने गर्दछन्, त्यस्ता महिलाको प्रजनन क्षमतामा कमी आउने गर्दछ। धेरै सुत्दा महिलामा हर्मोन स्रवा र मेंसटुअल साइकिलमा गलत प्रभाव पर्ने गर्दछ, जसको गर्भासयमा सिधा प्रभाव पर्ने गर्दछ।
डिर्पेसन :आवश्यकता भन्दा धेरै सुत्ने व्यक्ति डिर्पेसनको शिकार बन्ने सम्भावना धेरै हुने गर्दछ। धेरै निद्राको असर दिमागमा पर्ने भएकाले त्यसले डिर्पेसन निम्त्याउने गर्दछ।
डायबिटीजः धेरै समय सुत्दा तपाईलाई डायबिटीजको खतरा हुने गर्दछ। आवश्यकता भन्दा धेरै सुत्दा डायबिटीज २ को खतरा अझ बढी हुने गर्दछ।त्यसैले हरेक व्यक्ति ७ देखि ८ घण्टाभन्दा बढी सुत्नु विभिन्न स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउनु हो। (gnewsnepal.com बाट साभार)
जे माग्यो त्यहि पुरा हुने मन्दिर ! नाग र बाघले गर्छन मन्दिरको रक्षा ! जहा यस्तो रुपमा देखिन्छन भगवान ( भिडियो सहित)
किड्नी बिगार्ने मानिसको एउटा यस्तो बानीः समयमै जानकारी लिनुहोस र सेयर गर्न नभुलौ